Fitsapan-kevi-bahoaka : tsy misy vola ny Ceni | NewsMada
Fitsapan-kevi-bahoaka : tsy misy vola ny Ceni
Hisy ihany ve ny fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana? Hatreto aloha, tsy misy vola ho amin’izany ny Ceni…
« Ny fifidianana filohan’ny Repoblika no andrasantsika ao anatin’ny vola izay nomen’ny fanjakana amin’izao fotoana izao aloha. » Io ny nambaran’ny filohan’ny Ceni, Rakotomamana Hery, teny Androhibe, omaly, momba ny hoe hanao fitsapan-kevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana ny mpitondra.
« Tsy te hiresaka ny zavatra mbola any an-kibony omby aho », hoy izy momba izay fitsapan-kevi-bahoaka kasain’ny mpitondra hatao izay. Ny fifidianana filohan’ny Repoblika no karakarain’ny Ceni hatreto. Vola 40 miliara Ar natokana ho an’izany. Araka izany, tsy misy izay hoe hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka .
Ny adihevitra rehetra any ambadika any, aleo ny tomponandraikitra momba izany no hamoaka azy. Tsy miditra amin’izay resaka izay izy, raha ny fanazavany. Anjaran’ny tomponandraikitra sisa no mamariparitra ny fifidianana. Efa fantatra amin’ny alalan’ny And. 47 ao amin’ny lalàmpanorenana izany: eo anelanelan’ny 25 novambra sy ny 25 desambra amin’ity taona ity. Ny ambiny sisa: rahoviana ny tena daty marina?
Mila fandraisana andraikitra ny fanaraha-maso ny lisi-pifidianana
Ao anatin’ny lalàna mifehy ny lisi-pifidianana, manana adidy ny antoko politika sy ny firaisamonina sivily eo amin’ny fampangaraharana ny lisi-pifidianana. Tokony hiditra any amin’ny vaomiera ifotony eny anivon’ny fokontany izy ireo, hanara-maso ny fanamarinana ny lisi-pifidianana. Mba hialana amin’izay mety ho fisalasalana rehetra izany.
« Mangataka ny fahamatoran’ny besinimaro aho mba samy handray andraikitra », hoy izy. Tomponandraikitra avokoa ny rehetra, fa tsy azo entina na alatsaka an-katerena ny firenena. Mba samy handray andraikitra avokoa iny rehetra mba hangarahara tsara avokoa ny zavatra atao rehetra. Izay no ialana amin’ny olana mety hitranga.
Saro-pady ny lisi-pifidianana, ary anisan’ny fototra iray ngezabe mampangarahara ny fifidianana hatao amin’ity taona ity. Miezaka araka izay azony hatao ny Ceni, maka izay fepetra rehetra hampanjary izany lisi-pifidianana izany. Izay no namoriana ireo lehibem-pokontany 192 eto Antananarivo Renivohitra ny amin’izany, omaly.